Xildhibaan hore uga tirsanaa Golaha Wakiilada Somaliland oo lagu qabtay Garoonka Hargeysa, kadib... - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Xildhibaan hore uga tirsanaa Golaha Wakiilada Somaliland oo lagu qabtay Garoonka Hargeysa, kadib…
Ciidamada Somaliland ayaa Garoonka Diyaaradaha magaalada Hargeysa ka qabtay Mudane hore uga tirsanaa Golaha Wakiilada Somaliland oo tegay Muqdisho.
Ciidamada Booliska Somaliland ayaa xabsiga dhigtay Ibraahim Rayte, oo ka mid ahaa Golihii Wakiillada Somaliland ee dhowaan la bedelay, wuxuuna diyaarad ka raacay magaalada Muqdisho, iyadoo markii uu saaka ka degay Garoonka Hargeysa ay kaxeysteen ciidamo sugayey.
Xildhibaan hore Ibraahim Rayte maalmihii ugu danbeeyay ku sugnaa Muqdisho, wuxuuna maanta dib ugu laabtay Hargeysa; iyadoo wararku sheegayaan in looga shakisan yahay ka qeyb galka Doorashadii Aqalka Sare ee Somaliland ee dhowaan Muqdisho ka dhacday.
Previous articleRW Rooble oo bilowga Doorashada Golaha Shacabka u tegay Baraawe iyo Lafta-gareen oo uga hormaray
Next articleAxmed Madoobe: “Galmudug waa State Sharci ku dhisan maaha in Ahlu Suna & Caqabad lagu kiciyo..”